Madaxweynihii hore ee Somaliland oo si adag u naqdiyey ka qaybgalka Shirka London, dagaalka Buuhoodle iyo Khilaafka UDUB | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweynihii hore ee Somaliland oo si adag u naqdiyey ka qaybgalka Shirka...
Madaxweynihii hore ee Somaliland oo si adag u naqdiyey ka qaybgalka Shirka London, dagaalka Buuhoodle iyo Khilaafka UDUB
Hargeysa-(Berberanews)- Madaxweynihii horre ee Jamhuuriyadda Somaliland ahna Guddoomiyaha Xisbiga UDUB Md. Daahir Rayaale Kaahin, ayaa markii ugu horrreysay si adag u naqdiyey ka qaybgalka Somaliland ee Shirka Soomaalida loogu qabanayo London 23-k bishan, dagaallo toddobaadyadii hore ka dhacay deegaannada Buuhoodle iyo khilaafka Xisbiga UDUB ka dhex taagan.
Guddoomiyaha Xisbiga UDUB Daahir Rayaale Kaahin, oo maanta si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa ee Caasimadda dalka Somaliland, ka dib markii uu muddo lix bilood ah dalka dibeddiisa ku muqnaa.
Guddoomiyaha Xisbiga UDUB Md. Daahir Rayaale Kaahin, oo maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Cigaal ee magaalada Hargeysa, ayaa taageerayaasha iyo masuuliyiinta UDUB si diirran ugu soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha, iyaga oo u soo galbiyey gurigiisa gaarka ah oo geesta waqooyi kaga qabsan ama kaga yaalla dhismaha xarunta baarlamanka Somaliland ee badhtamaha magaalada Hargeysa. Daahir Rayaale ayaa tan iyo markii uu xilka wareejiyey isaga iyo xaaskiisuba deggan waddanka Faransiiska, isaga oo saaka diyaaradda ka soo raacay magaalada Dubai oo uu toddobaadkii ugu dambeeyey joogay.
Daahir Rayaale oo markii gegada diyaaradaha uu ka soo degay, isla markaana isaga oo dhoolla-caddaynaya dhammaystay salaan uu dadka soo dhaweeyey ee isugu jiray boqollaal taageerayaal ah iyo madaxda Xisbiga uu Guddoomiyaha ka yahay ee UDUB, ka dib warbaahinta kula hadlay qolka nasashada ee garoonka diyaaradaha, ayaa ka hadlay qodobbo kala duwan.
“Anigu kumaan taliyeen in laga qayb gallo shirka London, kamana qayb-galayno, laakiin maanta cidda ka qayb-gasha ayaa khayr iyo shar-ba waxay ka keenaan lagala xisaabtami doonaa. Shrikaa London lagu qabanayaa maaha mid danta Qaranka Somaliland ku jirto, mana taageersani ka qaybgalka uu ka qabgalayo Guddoomiye ku-xigeenka Xisbiga UDUB Axmad Yuusuf Yaasin.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha Xisbiga UDUB Daahir Rayaale Kaahin.
“Haddii wax la iga weydiiyo talada dalka waan ka hadlayaa. Laakiin, dagaalku marnaba ma fiicna waxaanan ku talin lahaa in la joojiyo colaadda ka taagan deegaannada Buuhoodle. Aad iyo aad baanan uga xumahay waxa dhacay.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha UDUB Daahir Rayaale oo ka jawaabayey su’aal laga weydiiyey sida uu u arko dagaalka dhawaan ka dhacay deegaanka Buuhoodle oo u dhexeeyey Ciidammada Somaliland iyo Ciidammo taabacsan Maamulka Khaatumo oo bishii hore lagaga dhawaaqay shir lagu qabtay degmada Taleex ee gobolka Sool.
Madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin oo wax laga weydiiyey khilaafka ka dhex-qarxay Xisbiga uu Guddoomiyaha ka yahay ee UDUB muddadii uu dalka ka maqnaa, gaar ahaan bishii koowaad ee sannadkan, waxa uu tilmaamay inay wax ka qaban doonaan UDUB ahaan khilaafkooda, isaga oo xusay in UDUB yahay xisbi ballaadhan oo Somaliland ka dhexeeya, isla markaana aan looga baran khilaaf dibedda u soo baxa oo badan.
Si kastaba ha ahaatee, Daahir Rayaale markii uu ahaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, waxa uu si weyn uga soo horjeeday inay cid Qaranka Somaliland metalaysaa ka qaybgasho shirarka loo qabanayo Soomaalida, iyada oo wakhtigii Xukuumaddiisa dad fara badan oo isugu jiray siyaasiyiin iyo madax-dhaqmeedka reer Somaliland Xabsiga u taxaabay, qaarkoodna dalka-ba ka mastaafuriyey. Hase-yeeshee, waxa uu Xilka wareejiyey 27-kii Julay, ka dib markii Madaxweynta maanta talada haya Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) codad badan kaga guulaystay doorashadii madaxtooyada oo dalka ka dhacday 26-kii June sannadkii 2010.
Previous articleGuddoomiye ku-xigeenka KULMIYE oo Xukuumadda Siilaanyo ku eedeeyey musuqmaasuqa iyo maamul-xumo baahsan
Next articleUjeeddada Xildhibaanno Haween ah oo ka socda Baarlamanka Jabuuti oo markii ugu horreysay Hargeysa Booqasho ku yimi